FAQ - U Hton Goldsmith & Jewellery
Step 1: ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အထည်လေးတွေကို ပထမဦးစွာရှာပါ။ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အထည်နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ ထည့်ရန် အကန့်အသတ်ရှိပါသောကြောင့် ကိုယ်လိုချင်သော ရွှေအလေးချိန် (သို့)ဒီဇိုင်း မရှိပါက အချိန်မရွေး Facebook Messenger ကနေ တစ်ဆင့် Customized Order မှာယူနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်လိုချင်တာလေးတွေ့တယ်ဆို “Buy Now” ကိုနှိပ်ပါ။
Step 2: ထို့နောက် Delivery လုပ်ရန်အတွက် အချက်အလက်များမေးမြန်းထားခြင်းများကို အတိအကျလေး ဖြေပေးပါ။ Information များအပြည့်အစုံထည့်ပြီးလျှင် “Place Order” ကိုနှိပ်ပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဘက်မှ အော်ဒါအီးမေးလ်(E-mail) ရပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း အော်ဒါနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များအား အသေးစိတ် ပြန်လည် Order Confirmation လုပ်ပေးပါမည်။
Account ဖွင့်ပြီးမှ Order မှာလို့ရတာလား?
Account မဖွင့်ပဲလည်းမှာလို့ရပါတယ်။ Place Order လုပ်ပြီးလျှင် Order Department မှလူကြီးမင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီး Order Confirmation အား Viber (သို့) Facebook Messenger မှတစ်ဆင့်ပြောပေးပါမည်။
Account ဖွင့်ပြီးလည်းအော်ဒါ မှာလို့ရပါသည်။ Account ဖွင့်ရန် (သို့) ဝင်ရန် သို့သွားပြီး Registration လုပ်ပေးပါ။ Account ရှိပါက ကိုယ်အော်ဒါတင်ထားတဲ့ Record လေးများကို ပြန်လည် ကြည့်လို့ရပါသည်။
Order မှာယူလိုပါက နာမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ ပေးပို့ရန်၊ Facebook အကောင့်ရှိလျှင် ဦးထုံ Page Messenger မှာ လာ Hi ပေးရန်(သို့မဟုတ်) Viber နံပါတ်ပေးရန်၊ အကယ်၍ Email အကောင့်ရှိလျှင် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Order အတည်ဖြစ်/မဖြစ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
အော်ဒါနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကို ပြောပြရန် ဆက်သွယ်လာလျှင် Order Confirmation လုပ်ပေးပါသည်။ မှာယူသော အထည်လေးများ ဆိုင်မှာရှိလျှင် ချက်ခြင်း Process လုပ်ပြီးပို့ပေးပါသည်။ အထည်မရှိခဲ့လျှင် အော်ဒါ လုပ်ရန် ကြာချိန်မှာ အထည်ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ၁ပတ်မှ ၃ပတ် ကျော် လောက်ထိ ကြာနိုင်ပါသည်။
Order ပယ်ဖျက်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
မှာယူထားသောအထည်အော်ဒါများအား ၂၄ နာရီအတွင်းပယ်ဖျက်လို့ရပါသည်။ စရံ ပေးပြီးအထည်လုပ်နေချိန်တွင် အော်ဒါ ပယ်ဖျက်ပါက လက်ခ တစ်ချို့တစ်ဝက်အားပြန်လည် ပေးဆောင်ရပါမည်။
ဦးထုံရွှေပန်းထိမ်မှ Order Confirmation ပြန်လုပ်ခြင်းမရှိပါက ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
Pabedan U Hton ☎️ 01-377680, 09-790609655 Viber Number: +959 977883599
Lanmadaw U Hton ☎️ 01-701390, 09-790609656 Viber Number: +959 965152335
(သို့) http://m.me/uhtongoldsmith ကနေတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Order Confirmation ဘယ်နှစ်နာရီ/ ဘယ်နှစ်ရက်အတွင်း လုပ်သလဲ?
Order Confirmation များကို ၂၄ နာရီ ကနေ ၂ ရက်အတွင်း ကြိုးစားပြီး Confirmation လုပ်ပေးပါတယ်။
Website မှရွှေထည်ပစ္စည်းမှာယူလျှင်ခန့်မှန်းခြေ5ခုအထိလက်ခံပါသည်။ ရွှေထည်ပစ္စည်း5ခုနှင့်အထက် မှာယူလိုပါက
(သို့) Messenger ကနေတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Customized Order မှာလျှင်ဘယ်လိုမှာရသလဲ?
Customized Order များမှာလို့ရပါသည်။အော်ဒါမှာယူတဲ့အခါ ဖုန်း (သို့) အီးမေး (E-mail) ကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ Messenger မှတဆင့် လူကြီးမင်းများမေးမြန်းလိုသော မေးခွန်းများကိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ရန်သူမျိူး၅ပါးအန္တရယ်ကြောင့်တခုခုဖြစ်ခဲ့သောလည်းကောင်း၊ ဘောင်ချာပျောက်သွားခဲ့သောလည်ကောင်း ဦးထုံရွှေပန်းတိမ်မှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ Order မှာပြီး Delivery မှတဆင့် Customer ထံရောက်သည်အထိတာဝန်ယူပါသည်။ Online မှ Customer များကို Delivery နှင့်စတင်ပို့ဆောင်သောအချိန်မှစ၍ပစ္စည်းအပျောက်အရှရှိခြင်း၊ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းပြဿနာမျိူးယနေ့အချိန်ထိမကြုံဖူးသေးပါ။
အော်ဒါနဲ့ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲလိုလျှင် ဦးထုံရွှေပန်းထိမ်နှင့်ရတနာရွှေဆိုင် ၏
Pabedan U Hton ☎️ 01-377680, 09-790609655
Viber Number: +959 977883599
Lanmadaw U Hton ☎️ 01-701390, 09-790609656
Viber Number: +959 965152335
အော်ဒါမှာပြီးလျှင် ဆိုင်မှာ လာယူလို့ရပါသည် (သို့မဟုတ်) Delivery ဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးရမည်ဆိုလျှင် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ Delivery ဖြင့်ပို့ဆောင်လျှင် မြို့နယ်အလိုက် ပို့ခကျသင့်ပါမည်။
Website မှမှာယူထားသောအထည်များကို ပြန် ရောင်း၊သွင်းလို့ရပါသလား?
Website ပေါ်မှဝယ်ယူထားသောအထည်များသည် အထည်မှန် ဈေးနှုန်းမှန်အရည်အသွေးမှန်ကန်စွာ ရောင်းချပေးထားသောကြောင့် အချိန်မရွေး ဦးထုံရွှေပန်းထိမ်နှင့်ရတနာရွှေဆိုင်သို့ပြန်လာ ရောင်း၊သွင်းလို့ ရပါသည်။
ဦးထုံရွှေဆိုင်က အထည်ပစ္စည်းအစစ်ဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ဦးထုံရွှေဆိုင်တွင်မှာယူထားသောအထည်လေးများသည် Data Record ရှိပါသောကြောင့် Messenger မှတစ်ဆင့် (သို့မဟုတ်)
(သို့) Messenger လာရောက် မေးမြန်းစုံစမ်းလို့ရပါသည်။ ဝယ်ယူပြီးသော ပစ္စည်းများကို ဘောက်ချာနှင့်တကွ ရှင်းပြပါသည်။
Instock ရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုလျှင် (၂)ရက်မှ (၃)ရက်အတွင်း ပို့ပေးနိုင်ပါသည်။ နယ်ဆိုလျှင် (၅)ရက်မှ(၇)ရက်အတွင်းပို့ပေးနိုင်ပါသည်။အကယ်၍ပို့ဆောင်ရန်အခက်အခဲရှိလျှင်ဦးထုံရွှေပန်းထိမ်မှ Customer များထံကြိုတင်၍အကြောင်းကြားပေးပါသည်။
ငွေ ပေးချေမှု အကြောင်းရေးပေးထားသော Link မှ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ငွေလွှဲပြီးမှ ပစ္စည်းမကြိုက်ရင် ပြန်လဲလို့ရမလား?
Website တွင်အထည်၏ခန့်မှန်းခြေတန်ဖိုးထည့်ပေးထားပါသည်။လက်မှုပညာဖြစ်သောကြောင့်ရွှေအလေးချိန်တွင်အတိုး၊အလျော့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ထို့ကြောင့် Place Order လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း Viber တွင်အသေးစိတ်လည်ရှင်းပြပါမည်။ရွှေဈေးအတက်၊အကျဖြစ်သောကြောင့်အထည်၏တန်ဖိုးကိုစရံပေးချေသောနေ့တွင်‌ဈေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်ပေးပါသည်။
အရစ်ကျဝယ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားပါကဖော်ပြပါ Link တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Website မှဝယ်ယူထားသောလက်ဝတ်ရတနာများကိုပြန်သွင်းလိုလျှင်ရွှေဈေးအတတ်အကျပေါ်မူတည်ပြီးဈေးနှုန်ကွာဟနိူင်ပါသည်။ပုံမှန်အားဖြင့်အခေါက်ထည်များကိုအထည်ပေါ်မူတည်၍ 8000 ဝန်းကျင်အထိကွာဟနိူင်ပါသည်။ 15 ပဲရည်နှင့် 14 ပဲ2ပြားကိုပုံမှန်အားဖြင့်အရှိရွှေချိန်အတိုင်း 15000 ခွာကောက်ပေးပါသည်။ ရွှေဈေးအတတ်အကျကြမ်းလျှင်ရွှေဈေးကွက်ပေါ်မူတည်၍ရွှေဈေးနှုန်းအတိုး၊အလျော့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဦးထုံရွှေဆိုင်မှအထည်များသည်ပြန်သွင်းသောအခါပြန်လည်၍အသုံးမပြုပဲပြန်ကောက်ထည်များကို အရည်ကျို၍ Design အသစ်ပြုလုပ်ကာရောင်းချပေးပါသည်။ပြန်သွင်းလျှင်ရနိုင်မည့်ခန့်မှန်းဈေးနှုန်းကိုဖော်ပြပါ Link တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ပြင်ပရွှေဖြင့် Customized Order အပ်နှံ့သည့် အထည်ပစ္စည်းများကိုမူ ဦးထုံရွှေပန်းထိမ်ရှိရွှေထည်ပစ္စည်းများနှင့်လဲလှယ်မှုပြုလုပ်ပြီးမှသာဈေးဖြတ်ပေးပါသည်။
အခြားတစုံတရာမေးမြန်းစရာရှိခဲ့ပါက Messenger (သို့မဟုတ်)
အမှတ် (528) မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ၂၇လမ်းနှင့်၂၈လမ်းထိပ်
ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်း – 01-377680, 09-790609655
Viber +959 977883599
(တနင်္လာနေ့တိုင်းဆိုင်နားသည်။ Close On Monday)
(Operation Hours 9am-5:30pm)
အခန်း (B) 01-05 ၊ မြေညီထပ်၊ လမ်းမတော်ပလာဇာ (သံစျေးအနီး)၊ လမ်းမတော်လမ်း
လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်း 01-701390, 09-790609656
Viber +959 965152335
(တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဆိုင်နားသည်။ Closed on Sundays)
(Operating hours 9am-5:30)